netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:Face,Lips & Eyes
SAI Sexy & Intellilgent Mascara- Love is in the air
-SAI Cosmetix က ထုတ်တဲ့ မျက်တောင်ကော့တဲ့ မာစကာရာ အချစ်တွေလေထဲမှာ...
-" Love is in the air "
-SAI Mascara - Made in Korea
SAI ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အချစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ - High Quality Dry Lash Formula နဲ့ အတူ
- အသုံးပြုရ လွယ်ကူပြီး ပျော့ပြောင်းတဲ့ High Technology Spiky Silicon Wand တို့က သဘာဝအတိုင်း သင့် မျက်တောင်တစ်ချောင်းချင်းဆီကို Lash Curling - ကော့ပျံလန်နေစေမယ်
-Hyper Bold Volume - စပါယ်ရှယ် ထူမယ်
-Long Wearing - အကြာကြီးခံပြီး
-Smudge-proof - ၁၈ နာရီ ကြာခံသည့်တိုင်အောင် မျက်လုံးအောက်တွေကိုလည်း လုံးဝမပျံ့သွားလို့ အမြဲစိတ်ပူနေရတဲ့ Panda Eyes လေးကို Bye Bye လို့သာ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတော့နော်
SAI Sexy & Intellilgent Mineral Powder(Oil Control 01)
-For both Sexy and Intelligent Ladies and Gentlemen
-အဆီမပြန်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး အသားအရေကို နုညံ့စေပါတယ်
-တောက်ပနူးညံ့တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျက်နှာပေါ်တွင် ပိုလျှံနေတဲ့ အဆီတွေကို စုပ်ယူပေးပါတယ်။
-မျက်နှာပေါ်တွင် မိတ်ကပ် ကွက်ခြင်းပြုခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
-တောက်ပဝင်းလဲ့တဲ့ မျက်နှာအသားအရေကို တစ်နေ့တာပတ်လုံး ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်
-Colorless Natural look လေးဖြစ်နေစေတာကြောင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး မရွေး၊ အသားရောင်မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
SAI Sexy & Intellilgent Mineral Powder(Natural Ivory 02)
-Pinkish-Yellow Tone for Fair Skin
-ဖြူချောလေးများ အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော သဘာဝ အလှတရားကို ပေးမည့် ပေါင်ဒါ
-ပြီးပြည့်စုံသော မိတ်ကပ်ခြယ်သမှု အပြင်အဆင်ကို ရရှိစေပါတယ်။
-တာရှည်ခံပြီး ပန်းရောင်သန်းနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အာမခံပါတယ်။
-အသားအရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပေါ့ပါးမှုကို ခံစားရစေပါတယ်။
-Light weight ဖြစ်ပြီး long-lasting ဖြစ်စေတဲ့အပြင် light-coverage လဲဖြစ်ပါတယ်
SAI Sexy & Intellilgent Mineral Powder(Natural Beige 03)
-Yellow Tone for Medium and Tanned Skin
-ညိုချောလေးများ အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော သဘာဝ အလှတရားကို ပေးမည့် ပေါင်ဒါ
-မျက်နှာကို မှုံမှုံညက်ညက်လေးနှင့် သနပ်ခါးလိမ်းထားသလို ဖုံဖုံမှုံမှုံ တစ်နေကုန် နူးညံ့ပေါ့ပါးလှပ စေပါတယ်
-Mineral type လေးဖြစ်လို့ ပေါင်ဒါလေးက မှုန့်ညက်နေတဲ့အတွက် သနပ်ခါးလိမ်းတာထက်ပို တဲ့ နှုးညံ့တဲ့အထိတွေ့ရစေမှာပါ
-ပေါ့ပါးတဲ့ powderမှုန့်လေးတွေဟာ မျက်နှာရဲ့ အကွက်သေးသေးပါမကျန် ညီညာစေပြီး ဖုံဖုံညီညီလေးဖြစ်စေလို့ မိတ်ကပ်ကွက်တာ ပြာတာတွေကို စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်
-အဆီပြန်တာ အသင့်အတင့်ထိန်းပေးလို့ ၀က်ခြံနဲ့အဆီဖုလေးတွေကို မဖြစ်စေတော့ဘူးနော်။
Ma'suri Cotton Mask (White Rice)
စပါးမှရရှိတဲ့ Rice Bran အဆီအနှစ် သလဲသီးအဆီအနှစ် ပဲပိစပ် Soy Bean အဆီအနှစ် နဲ့ အသားအရေကို ဖြူစင်လာစေတဲ့ Niacinamideပါဝင်တဲ့ Whitening Mask Sheet လေးပါနော်
Min: ($) Max: 96($)
All Blusher Cable CC Cream Cleansing Concealer Cream Cushion Essence Eyebrow Eye-Care Eyelash Curle Eyeliner Eyeshadow Highlights Lip stick Lipbalm Make Up Mascara Mask Nose Up Powder TonerှSponge Face Care Body Care Skincare
All Beauty Electronic
All 21 23 #01Light Code:8858842041598 #02Ginger Code:8858842041604 #03Medium Code:8858842041611 #04DeepBrown Code:8858842041682 #05Dark Code:8858842041635 #1 Light Beige Code:8809212703097 #2 Natural Code:8809212703103 #3 Translucent Code:8809212703080 #4 Crystal Code:8809212703110 #21 Code:8809349140109 #23 Code:8809349140116 #21 Code:8809349140246 #23 Code:8809349140277 #21 Code:8809362062792 #23 Code:8809362062808 #21 Light Code:8809362062952 #23 Natural Code:8809362062969 #1 Light Code:8858842010037 #2 Green Code:8858842010044 #1 LIght Code:8858842010075 #2 Green Code:8858842010082 #23 Blue Orange Gold #01 Petit Code:8858842012970 #03 Sexy Code:8858842012994 #2 Green Base Code:8858842025789 #3 Purple Code:8858842025796 #01 Code:8858842025840 #02 Code:8858842025857 #03 Code:8858842025864 #23 Natural Beige #01 Chewy Berry Code:8858842029541 #02 Sugar Pink C42029558ode:88588 #03 Lolli Peach Code:8858842029565 02 Dark Brown #21 True Bright #1 Dark Brown #2Red Brown #3 Brown #4 ASH Brown 01 Blonde Brown 02 Natural Brown 03 Red Brown #23 Natural Bright #25 Honey Bright #01 Aura Light #02 Golden Light #03 Pink Light Strawberry Cherry Grape #1 Light Brown #2 Ash Brown #3 Dark Brown #4 Grey Brown #1 Rosy Pink #2 Red Cherry #3 Orange Sherbets #4 Red Wine Medium (KB-6119) Dark (6126) Light 1 Medium2Dark3Honey Moon Kiss In The Dark Touch Me WEST WHITE STORY HOTEL PEARLAFORNIA AL CAPPUCCINO KEEP CALM AND LOVE THIS COLOUR LAVENDER MC QUEEN IVORY BEIGE NUDE BEIGE Rose & Woody VANILLA BEIGE WARM BEIGE MINT OF CHANGE INGLORIOUS MUSTARDS SUPER BLACK C'MON CHAMELEON! NO. 1 CANDYDATE THE BIG BLUE THEORY DONT LIE, LAC! 010 LIGHT VELVET 020 BEIGE VELVET 030 NATURAL VELVET 030 SAND VELVET YOUR FUCHSIA STARTS TODAY BRONZE ME UP, SCOTTY! A FLAMINGO IN SANTO DOMINGO ROSE PROPOSE GRAPEDATION NUDE NOT EXPIRED YET PLEASE TELL ROSY BLOODY VAMPIRE KISS BLACK BLACK WATERPROOF MEDIUM DARK RENUDE MY STYLE BLOSSOM 'N ROSES THE MUST-HAVE MATTS METALLUX SUNNY SYMPATHY TRANSPARENT MATT LIGHT INFUSION